Teknolojia sy Marketing
Mihidy ny baolina kitra amerikana
Mihamaro ny orinasa mandray ny teknolojia raha ny paikadim-barotra no resahina. Rahoviana Nivoaka avy tao amin'ny Super Bowl i Pepsi, niantso izany ny mpanao gazety nentim-paharazana filokana.
Tsy filokana ve ny fanaovana doka amin'ny Super Bowl? Marina ve?
Ny dokam-barotra Super Bowl dia mitentina $ 3 tapitrisa dolara isaky ny 30 segondra. Pepsi dia nikasa dokam-barotra 30 secoond roa sy doka 60 segondra… 12 tapitrisa dolara izany. Ary ny vidiny dia niakatra 10% teo anelanelan'ny 2008 sy 2009. Andao hanao ny matematika. 12 tapitrisa dolara izany hahatratrarana mpijery 98 tapitrisa .. na $ 0.12 eo ho eo isaky ny mpijery.
Aza adino izany Ny tombom-barotra Pepsi dia nilatsaka 43 isan-jato raha ny marina nanao mandoa ny dokam-barotra Super Bowl. Hmmm, toa tsy nahitam-bokatra ny doka Super Bowl.
Tsy ao anatin'izany, mazava ho azy, ny tena filokana… Manakarama masoivoho izay afaka mamokatra varotra izay hitondra tena fifamoivoizana taonina amin'ny marikao. Andao ataovy toy ny $ 0.10 ny tombotsoan'ny soda tsirairay… midika izany fa ny dokam-barotra nataon'i Pepsi dia tokony handroaka ny mpijery tsirairay hividy Pepsi iray (soda mihoatra ny 100 tapitrisa) farafahakeliny handoavana ny vidin'ny doka.
Tsy nisy izany, ary tsy izany koa no nitranga.
Mifanohitra amin'izany no izy, amin'ny alàlan'ny fandraisana ny haino aman-jery nomerika, Pepsi dia afaka mampiasa vola amin'ny teknolojia viral na sosialy amin'ny ampahany kely amin'ny vidiny sy ny rsamy mitovy ny isan'ny mpijery. Mazava ho azy fa tsy hitranga amin'ny hetsika iray ao anatin'ny 2 minitra… fa iza ao an-tsainy marina no maniry izany? I Pepsi dia mila paikady maharitra sy vokatra tsara sasany hamerenana azy.
Ahoana raha nanohana fifaninanana 'dokam-barotra viraly tsara indrindra' i Pepsi izay nahazoan'ilay mpandresy $ 1 tapitrisa? Miaraka amin'ny loka $ 1 tapitrisa fanampiny? Angamba nampiroborobo ny fifaninanana izy ireo nanerana ny Youtube, Twitter ary Facebook tamin'ny famatsiam-bola fanampiny $ 1 tapitrisa.
Inona no teknika heverinao fa hahatratra bebe kokoa… ary miaraka amin'ny mpihaino sy hafatra mifandraika kokoa? Ny teknolojia sy ny varotra dia lasa mifamatotra kokoa miaraka amin'ny fotoanany ary orinasa maro no nanokatra ny mason'izy ireo ny amin'ireo zavatra mety hitranga.
Fanamarihana fotsiny: Tsy amin'ny lafiny rehetra, miady hevitra aho raha miasa na tsia ny Super Bowl Ads. GoDaddy dia nahita fahombiazana lehibe nandritra ny taona maro tamin'ny fahazoana ny fizarana tsena fisoratana anarana mpanao dokam-barotra mahatsikaiky sasany. Ohatra tsara fotsiny io rehefa tsy mandeha izy ary fotoana mety hampiakarana ny fampodiana vola amin'ny media nomerika.
Fanamarihana iray hafa: heveriko fa mila manafoana ilay fango vaovao ihany koa i Pepsi. Moana io.
Tags: dokam-barotraara-barotraPepsisuper bowl
26 Desambra 2009 à 9:59
Heveriko fa hevitra tsara kokoa sy maharitra ny tsy fanaovana doka Super Bowl ary mandany ny vola any an-kafa. Efa nisy mpampiasa namorona hetsika video ny Mt. Dew, ary namoaka votoaty tena tsara izy ireo. Momba ny fango, i Pepsi dia miezaka ny ho tonga amin'ny azy manokana, fa tsy mandondona ny endritsoratra Coke. Manontany tena aho hoe iza no tonga voalohany tamin'ny Logo, Pepsi na ekipa fampielezan-kevitra Obama. Ny logo mihitsy no toa tsy maneho na inona na inona.